भाग्यमानी छोरा : भाग ७ - बुवाको गल्फ्रेण्डसंग उनकै घरमा रसलिला
यस भागमा बाबाको गल्फ्रेण्ड 'सुभुद्रा' संग भएको भेट, त्यसपछिको वार्तालाप र यौन सम्बन्धको घटनाको बेलिबिस्तार भएको छ । कसरी भयो त सुरु सुभुद्रासंगको भेट वार्ता र यौन सम्बन्ध थाहा पाउन पूरा कथा पढ्नुहोस् ।
भाग्यमानी छोरा - भाग ६ [Previous Episode]
तपाईंहरुलाई थाहै छ म कहिले काहीँ हाम्रो बुवाको पसलमा बुवा बस्न नपाएको बेलामा जाने गर्छु । खानपिन सकेपछी म पून: पसलमा गएर बसें । दिउँसोतिर बुबालाई खोज्दै एउटी सत्ताइस-अठ्ठाइस बर्षकी हेर्दा विवाहित जस्ती लाग्ने, प्वाँट आईमाई पसलमा आएर बुबाको बारेमा निकै सोधेपछी मैले पनि उनीसँग धेरै कुराहरु सोधें । उनी सधैं पसलमा दिउँसोको समयमा आएर भित्रै बसेर पत्र-पत्रिकाहरु पढ्ने गरेको कुरा बताइन् । पसल नजिकै उनको घर पनि रहेछ र उनको श्रीमान् कोरियामा रोजगारी गर्दै रहेछन् तिन बर्षदेखि । मैले उनीलाई भित्रै आएर पत्र-पत्रिका पढ्न भनें । बुबाले दिनुभएको सुविधा मैले पनि दिनुपर्छ भन्ने मान्यता मैले राखेको थिएँ । उनी भित्र आएर बसिन् । अनि उनीलाई मन लागेको पत्रिकाहरु झिकेर आफ्नै पसलझैं पढ्न थालिन् ।
उनले पत्रिका पढ्दै मस्त भइरहेको बेलामा मैले उनीलाई नियालेर हेरें । मंगोलियन परिवारकी तिनी टाइट जिन्स र टि-शर्टमा थिईन । उनको टि-शर्टको गला निकै तलसम्म थियो र त्यसबाट उनको बुब्सको माथिल्लो भाग निकै पोटिलो देखिएको थियो भने बुब्सको बिचको खोल्सोबाट उनको ब्राको केही भाग स्पष्ट देखिन्थ्यो । हामी कुराकानी गरिनै रहेका थियौं । उनको तिघ्रा जिन्सबाटै भएपनि निकै भरिलो र मिलेको देखिन्थ्यो भने पुठ्ठा स्वाभाविक भन्दा केही ठूलो र फैलिएको देखिन्थ्यो । मुडामा बस्दा उनको जिन्सको पछाडीबाट पुठ्ठा बाहिर निस्कन आतुर झैं देखिन्थ्यो । निकै गोरो उनको पुठ्ठामा पेन्टीको माथिल्लो भाग पनि हल्का देखिएको थियो । पत्रिका पढ्दै गर्दा उनले घरिघरि आफ्नो बुब्सतिर पनि नियालेर हेर्थिन् र घरिघरि टि-शर्टलाई हल्का मास्तिर तानेर मिलाएझैं गर्थिन् । आधा घण्टा त्यहाँ बस्दा उनले सात-आठ पटक आफ्नो टि-शर्टलाई त्यसरी मिलाउन खोजेझैं गरिन् । तर, जति जति उनी आफ्नो टि-शर्ट मिलाउँथिन् त्यति नै उनको छाती खुलेको मैले अनुभव गरेको थिएँ । एकपटक उनले हातलाई टि-शर्टको खुल्ला भागबाट भित्र छिराएर बुब्सलाई समाएर मिलाएझैं गरिन् अनि उठेर भनिन् “आउनुस् न मेरो घरमा म खाजा ख्वाउँछु ।” अनि बाहिर निस्केर लागिन् । मैले जवाफमा “हुन्छ आउँला नि?” मात्रै भनें ।
निस्कने क्रममा उनले दुवै हातले चाकको पुठ्ठालाई समाइकन च्याप्प अठ्याईन् । मैले उनको त्यो हरकतलाई निमन्त्रणाको रुपमा स्विकारें । बाहिर निस्केर उनी पसलतर्फ फर्केर सोकेसमा दुवै पोकालाई टेकाउँदै मतिर फर्केर भनिन् “आउँला नि हैन अहिले नै जाउँ न ।” अनि माथिल्लो दाँतले तल्लो ओंठलाई टोकेजस्तो गरि खेलाईन् । मेैले जिस्कदैं भनें “बरु भन्नु न के ख्वाउनु हुन्छ ?” उनको उत्तर थियो “के खाने भन्नु न ? म त्यही ख्वाउँछु नि ?” मैले पनि आफ्नो भित्री ईच्छा जाहेर गर्दै भनें “ख्वाए त के के खाईन्छ खाईन्छ नि ?” “मलाई नै खाने बिचार गर्नुभा' हो कि क्या हो ? त्यो त अलि मेहनत गर्नुपर्छ नि त्यति सजिलै कहाँ पाईन्छ र ?” उनको त्यो स्विकारोक्ति थियो । मैले हात बढाएर उनको हात छुन खोज्दै भने “मेहनत गर्न त म सिपालु पो छु नि ?” उनले मेरो हातबाट छुनु अगावै आफ्नो हात पर हटाउँदै भनिन् “खै निस्कनु न त ? हामी पनि हेरुँ कतिको मेहनती हुनुहुन्छ ?” मेरो लाँडो हल्का ठाडो भइसकेको थियो, म उठें र लाँडोलाई हल्का मिलाएर बाहिर निस्किएँ अनि सटर आधा मात्र तानेर उनको पछाडी लागें ।
हिंड्दा उनले गजबसँग दुवै पुठ्ठा एकापसमा ठोकिने गरि हल्लाइ हल्लाइ हिंडिरहेकी थिइन । म उनीभन्दा केहि पछाडी मात्र थिएँ । मलाई उनको चाक हल्लाई निकै मन परिरहेको थियो । उनले "किन डराउनुभा सँगै हिडौं न आउनु" भनिन् र टक्क अडिइन् । जब म उनको समानान्तर पुगें उनी मसँगै हिंड्न थालिन् । सँगै हिंड्दा मेरो नजर उसको छातितिर पुगिरहेको थियो र उनको छाति मजाले हल्लिरहेको थियो जसले गर्दा उनको बुब्स निकै मजाले उभारिएका थिएँ । उनको घर पुग्दासम्म हामीबिच केहि बोलचाल भएन ।
च्यानल गेटबाट छिरेर भर्याङ् चढेर दोश्रो तलामा उक्लिएपछि उनले चाबीले घरको ढोका खोलिन् । मैले सोधें “को को हुनुहुन्छ त घरमा ?” “बहिनी र म मात्रै हो । ऐले गाँउ गएकी छे बहिनी त ।” मैले नसोध्दै बहिनी गाँउ गएकी छ भन्नुको अर्थ मेरो लागि बाटो खाली छ भन्नु रहन्थ्यो । भित्र छिरेपछी उनले मलाई सोफामा बस्न अह्राइन र आफू छेउको कोठातिर छिरिन् । चिटिक्क मिलेको सफा अनि मेहनत गरि सजाइएको उनको कोठा हेर्दै म भुलें । अरु कोठाहरु कस्ता होलान् भन्ने जिज्ञासा पनि उत्तिकै थियो । अगाडी ठूलो बयालिस ईन्चको टि.भी. थियो अनि टि.भी.को छेउमा सोकेसभित्र लस्करै सजाइएका स्वदेशी तथा बिदेशी ब्राण्डका रक्सीहरु । अर्को पट्टी निकै नै धेरै परफ्युमहरु सजाईएका थिए । हरेक भित्ताको बिचमा निकै राम्रा चित्रहरु फ्रेममा टाँगिएका थिए र चित्रको दायाँ बायाँ साना साईजका उनैका एकल फोटोहरु टाँगिएका थिए ।जसलाई हेर्दा लाग्थ्यो उनी कुनै चर्चित अभिनेतृ वा मोडल हुन् । सोफाको छेउ-छेउमा ठुला साईजका टेडी बियरको खेलौनाहरु थिए भनें अगाडी टि-टेबुलमा टि.भी.को रिमोट अनि केही पत्रिकाहरु राखिएका थिए । मैले यसो आँखा घुमाएर उनी छिरेको कोठामा हेरें । उनले जानीजानी हो या अन्जानमा ढोका लगाएकी थिईनन् । ढोकाबाट मैले कोठाको कुनामा उनीलाई देखें । उनी सायद: ऐना हेरिरहेकी थिईन् ।
मैले हेर्दाहेर्दै उनले आफ्नो टि-शर्ट खोलिन् अनि एक छेउमा राखिन् त्यसपछी ब्रा पनि खोलिन् र टि-शर्ट सँगै राखिन् । आम्मै उनका बुब्स त आमाका भन्दा ठूला थिए र छातीमा कुनै भकुण्डो सोझै टाँसेका जस्ता पुट्ट देखिन्थे । उनले त्यसमाथी गाउन लगाइन र त्यसपछी गाउनलाई माथी उचालेर पेन्ट खोलिन् अनि त्यसरीनै पेन्टी पनि खोलिन् र अघि ब्रा र टि-शर्ट राखेकै ठाउँमा राखिन् । जब मेैले उनी कोठाबाट निस्कन लागेको भेउ पाएँ, आफ्नो नजरलाई भित्तामा भएको चित्रमा केन्द्रित गरें ।
उनी आएर मेरो अगाडी उभिएपछि मात्रै उनीलाई हेरें र थुक निल्न बाध्य भएँ किनकी उनको गाउन लुज त थियो नै यति डिप-कट थियो कि छातीको कपडा उनको बुब्सको निपलमा मात्र अडेको जस्तो थियो । गाउनमा उनको छाती झनै अगाडी उठेको जस्तो देखिन्थ्यो । मैले प्याच्च बोलिहालें “खाजा खान बोलाएर खानै नदिई ठहरै पार्नुहुन्छ कि क्या हो हजुरले त ?” आफूभन्दा झण्डै दश बर्षले जेठी आईमाईसँग त्यसरी कुरा गर्दा म आफैंलाई अलि असहज लागिरहेको थियो, उनले मेरो छेउमै आएर बस्दै भनिन् “ल भन्नुस् के खानुहुन्छ ? म त्यही ख्वाउँछु हजुरलाई !” उनको बुब्स देखेर मलाई कति खेर समाएर मसल्न थालौं भईसकेको थियो, म उनीतिर फर्किएर उनको बुब्सतिर देब्रे हात बढाउँदै भनें “खान त काँचो काँचो नै मन छ नि हुन्छ मात्र भन्नु न !” अनि मैले उनको बुब्समाथि हात राखिदिएँ । उनले लामो सास तान्दै भनिन् “कति हतार भाको मैले ख्वाउँदिन भनेकी छु र ?” अनि आफ्नो मुख मेरो मुख नजिकै ल्याईपुर्याईन् । मेरो ओंठ र उनको ओंठको बिचमा ईन्च मात्रको दुरी थियो र उनको र मेरो सास एकापसमा ठोकिन थालेको थियो । उनले विस्तारै आफ्ना आँखालाई झुकाइन् । मैले ओंठ बिचको दुरी घटाएर उनको ओंठमा ओंठ जोडेर उनको बुब्सलाई गाउन माथिबाटै आफ्नो हत्केलामा लिने कोशिस गरें ।
उनी मसँग छुट्टिने कोशिस गर्दै भनिन् “पहिले म ढोका लगाएर आउँछु ।” अनि उनी उठेर मुलढोकातिर लागिन् म पनि जुरुक्क उठेर उनको पछिपछि लागें । मेरो लाँडो ठन्किसकेको थियो । उनले ढोकामा चुकुल लगाएर पछाडी फर्कदा उनको बुब्समा मेरो कुम ठोकियो र झस्किदैं “आबुई !” भनिन् मैले च्याप्प समाएर उनको ओंठ चुस्न सुरु गरें लगभग पैतालिस् सेकेण्डसम्म मैले उनको मुखमा मुख जोडेर किस गरेको थिएँ र त्यो बिचमा उनले मलाई भरपूर साथ दिएकि थिईन् । त्यो पहिलो किस तोड्नलाई उनले नै पहल गरेकी थिईन् । मेैले उनको ओंठबाट आफ्नो ओंठ छुट्टिनासाथ भनें “आई कान्ट वेट फर दिस् !”
उनले मलाई खस्काएझैं गरि हल्का स्वरमा भनिन् “आजकालका ठिटाहरु कुनै कुरामा पनि धैर्य गर्न सक्दैनन् ।“ मैले त्यस झटारोको जवाफ दिने हेतुले भनें “छिराउन मात्रै पाउँ न धैर्य कसले गर्दो र’छ म देखाइदिईहाल्छु नि ?” अनि उनका दुबै बुब्स समाएर निचोर्न थालें । उनीमा निकै छटपटी बढ्न थालिसकेको थियो । मैले आफ्नो दाहिने हातले उनको देब्रे बुब्सलाई गाउनबाट बाहिर निकालें अनि मुख जोडेर निचोर्दै चुस्न-चाट्न थालें । आफ्नै आमा र बहिनीलाई चिकेर खप्पीस् भएको मलाई कमजोर मुल्याङ्कन गर्नु उनको भूल थियो । उनका बुब्स चुस्दै गर्दा मैले अर्को हातले उनको गाउनलाई माथि-माथि सार्दै कमरसम्म ल्याएर उनका पुठ्ठा खेलाउन सुरु गरिसकेको थिएँ ।
उनी निकै उत्तेजनामा आएर “स्वाँ…ऽऽऽऽस्वाँ…ऽऽऽऽ आऽऽऽहऽऽऽ... मेरो राजा ऽऽऽऽऽऽऽ प्लिज छिराउनु न मलाई…ऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽ स्वाँ… ऽऽऽऽस्वाँ…ऽऽऽ उँ… ईस्सस खपिनसक्नु भयोऽऽऽऽ... प्लिजऽऽऽ...” भन्देै थिई । यतिखेर मेरो एउटा हातले उनको पुठ्ठा खेलाइरहेको थियो भने मुखले उनको बुब्स चुसिरहेको थियो । अर्को हातले बुब्स नै खेलाईरहेको थियो । उनको बुब्स खेलाउँदै गरेको हातलाई मैले तल सार्दै उनको पुती भएठाउँ पुर्याएर छामें । बाबै उनको पुती त निकै छिपछिपे भईसकेको थियो । मैले आफ्नो हातको माझी औंला उनको पुतीभित्र छिराईदिएँ । उनको मुखबाट निस्कियो “ईऽऽऽ..स्स्स्स्सऽऽऽ.............” ढोकाको नजिकमै मैले उनीलाई गाउन खोलेर नाङ्गो बनाएँ अनि ढोकामा उनको ढाड टाँसेर एउटा खुट्टालाई फट्याएर आफूपनि झुक्दै काँधमा अड्याएँ र उनको पुतीमा मुख जोडेर चाट्न सुरु गरें । उनको पुती चाट्दै गर्दा घरिघरि मेरो हातको औंलाले उनको पुतीलाई खेलाइपनि रहेको थियो । केहिबेरमै उनले पुतीबाट निकै पानी फालेर मेरो टाउकोलाई आफ्नो पुतीमा अँठ्याईन् र सम्पूर्ण शरिरनै लल्याङ्लुलुङ्ग पारेर छोडिन् जसका कारण उनको शरिर भुईमा सोहोरिएर आयो ।
मैले उनीलाई उठाएँ र सोफामा बसाएँ अनि आफूपनि उनीसँगै बसें र फेरी उनको पोकालाई हातले मजाले मसल्न सुरु गरें, उनले आँखा खोलिन् अनि मैले भनें “कसको धैर्य तगडा रहेछ त ?” उनीले मेरो ओंठमा ओंठ जोडेर किस गरिन् अनि भनिन् “यु आर सो गुड !” मैले उनको हात समातेर मेरो कट्टुको माथि राखिदिदै भनें “बिचरा यसले त बाहिर निस्कनै पाएको छैन हजुर त खलाँस भईहाल्नुभयो ?” उनले मेरो कट्टुभित्र हात हालेर लाँडोलाई हातमा समाउँदै भनिन् “यसलाई म ठिक पारिहाल्छु नि ? उँम्ऽऽऽ..मऽऽऽ.... खाईलाग्दै छ जस्तो छ !”
मैले कट्टुलाई तल सारेर आफ्नो लाँडोलाई स्वतन्त्र रुपमा उनको हातमा थमाउँदा उनले आश्चर्यित हुँदै भनिन् “आम्मै ! कत्रो ठूलो ! मोटो पनि छ !” मैले उनको बुब्समा मुख जोडेर उनको निपललाई दाँतले कुतुर-कुतुर पारिदिएँ अनि उनको टाउकोलाई दुवै हातले समाएर लाँडोको नजिकै झुकाउँदै भनें “अब यसलाई मुखमा लिएर चुस्नुस् !” उनले सहजै मुख खुल्ला गरिन् र मैले उनको टाउकोलाई अझै तल झुकाएर उनको मुखभित्र लाँडो छिराईदिएँ । त्यसपछि उनले मेरो लाँडोलाई मिलाई मिलाई चुस्न सुरु गरिन् । लाँडो चुस्दाचुस्दै उनी सोफाबाट भुईंमा उत्रिइन् र भुईंमा घुँडा टेकेर बस्दै मेरो लाँडो चुस्न थालिन् जब जब मेरो लाँडो उनको मुखमा सर्वाधिक छिर्न खोजेको हुन्थ्यो मैले उनको टाउको समातेर लाँडोको फेदसम्म पुर्याउने कोशिस गर्थें । उनलाई निकै गाह्रो हुन थाल्दा मात्रै मैले उसको टाउकोलाई स्वतन्त्र छोडिदिन्थें । निकैबेर लाँडो चुस्दा उनले मेरो गेडालाई पनि चुस्ने गर्थिन् अरु भन्दा पनि लाँडोको सुपारी जस्तो टुप्पोलाई उनले दाँतको सहायताले हल्का दबाब दिन्थिन् र टुप्पोलाई जिब्रोले राम्रैसँग घर्षण गराउँथिन् । मलाई पनि राम्रै मजा आईरहेको थियो । अब उनको पुतीमा लाँडो छिराएर चिकेन भने ढिलो हुन्थ्यो त्यही भएर उनलाई चुम्बन् गर्दै मैले त्यहीं सुताएर टाङ्ग फट्याएर उनको पुतीमा लाँडो छिराएर मच्चिन थालें । उनले नै हल्का चाक उचालेर मेरो लाँडोलाई आफ्नो पुतीमा छिराउन सहयोग गरिरहेकी थिई । उनको पुतीभित्र मेरो लाँडो तातो भईरहेको थियो र उनको हाउभाउले गर्दा मजा आइरहेको थियो ।
उनको पुती आमाको जस्तो खुकुलो त थिएन अनि रुबीनाको जस्तो टाइट पनि थिएन तर मेरो लाँडोको लागि ठिक्क थियो । मैले मजाले उनको पुतीमा लाँडो ठेले र धमाधम धक्का दिएर चिक्न थालें । कच्याकऽऽऽऽऽ.... कच्च…ऽऽऽऽऽ कच्चऽऽऽऽऽ क्वाँच… ऽऽऽऽऽ क्वाँच… गर्दै मेरो लाँडोले उनलाई चिकिरहेको थियो । उनी “मेरो राजा अलिऽऽऽ….... भित्रऽऽऽ... गेडैसित छिराउनुस्ऽऽऽ... मेरो पुतीलाई छियाछियाऽऽऽऽ... हुने गरि…चिक्… नुस्… आहऽऽऽ.... आहऽऽऽ.... अझै……….. आहऽऽऽ.... अझै……….. आहऽऽऽ.... कस्सेर………….. कस्सेर………….. चिक्नुस् आहऽऽऽ....” भन्दै मलाई सहयोग गरिरहेकी थिईन् । निकैबेर त्यसरी चिक्दा उनको छातीमा भएका भकुण्डो जस्ता बुब्स निकै गतिमा मच्चिरहेका थिए।मेरो शरिरबाट पसिना आउन थालेको थियो । उनले मलाई आफूबाट छुटाईन् र हत्तपत्त मेरो लाँडो मुखमा राखेर चुस्न थालिन् । उनले मेरो लाँडोमा लागेको आफ्नै पुतीको श्रावलाई सफा गरिन् र लाँडो छोडेर कुकुरको जस्तो पोजिशनमा बस्दै चाकका पुठ्ठा फट्याईन ।
मैले पछाडिबाट चिक्नको लागि उनले आग्रह गरेकी हुन् भन्ने बुझें । डगी स्टाइलमा मैले आजसम्म चिकेको थिईन । अगाडीबाट भन्दा यसरी चिक्दा पुती अलि बढी टाईट भएजस्तो अनुभव हुँदो रहेछ भने मजा पनि निकै आउँदो रहेछ । उनलाई त्यसरी चिक्दै गर्दा मेरो हातले उनका पुठ्ठालाई समाएर फट्याउँदै चाकको प्वालमा बुढी औंला छिराएर खेल्न थालें । एक त उनको चाकमा बुढी औंला सजिलै छिरेको थियो, अर्को त म रुबीनालाई चाकमा चिक्ने तयारीमा थिएँ ।
उनको मुखबाट कोठानै उत्तजित बनाउने आवाज आईरहेकै थियो । मैले चिक्दाचिक्दै उनको पुतीबाट लाँडो स्वाट्ट निकालेर उनको चाकको प्वालमा ठेलें प्वाट्ट गर्दै मेरो लाँडो उनको चाकमा छिर्यो ।
उनको मुखबाट निस्क्यो “जस्तो बाउ उस्तै छोरा ! पुतीमा जति चिक्न दिएपनि चाकमै चिक्नुपर्ने...” बल्ल उनको मुखबाट सबै कर्तुत निस्केको थियो । बुबा हरेक दिन यिनीकोमै दारु खाएर यिनको चाकमा चिकेर मेरी आमालाई अधकल्चो प्यासी बनाएर छोड्नुको कारण मलाई लाग्यो । त्यसपछी झनै मैले उनको चाकमा दनादन पेल्न थालें । चाकमा पहिलोपटक भएर हो कि मेरो लाँडो पोल्न थालेको जस्तो टट्याईरहेको थियो, उनले “आऽऽऽ...हऽऽऽ... थुक छिराउनु न चाकमा पोल्यो... उऽऽऽफ्ऽऽऽ गाह्रो भयो...” भनेपछी मैले मुखभरीको थुक उनको चाकको प्वालमा झारें । त्यसपछी त मेरो लाँडो उनको चाकमा सजिलै ओहोर दोहोर गर्न थाल्यो । जब मेरो लाँडो टनटनिएर फुसी ओकल्ने अवस्थामा आईपुग्यो, मैले उनको चाकबाट लाँडो निकालें अनि उनीलाई भुईंमा तुरुन्तै उत्तानो पारेर उनको मुखनेर लाँडो लगेर छोल्न थालें । उनले भनिन् “चाकभित्रै झारेको भए भईहाल्थ्यो नि ?” मैले भनें “चाकभित्र त बुबाले झार्नुहुन्छ होला ! म मुखमै झार्छु । खै मुख खोल्नुस्…” उनले मुख खोल्थिन् या खोल्दिनथिन् मैले भने उनको गालामा दुवैतिरबाट हातले अठ्याएर मुख खुल्ला गराउँदै छोल्न थालें र छिनमै उनको नाक, आँखा अनि ओंठमा बाक्लो फुसी झर्यो । झरेको फुसी केहि मात्रमा उनको मुखभित्रै पनि छिरेको थियो ।
उनले मुखभित्र फुसी घिन मानेझैं गरेकी थिईन । तर मैले त्यसपछी तुरुन्तै लाँडो उनको मुखमा ठेलेर बुजो लगाईदिएर मुखलाई नै चिकेको जस्तो गर्न थालें । जब मेरो लाँडो सफा भयो मैले उनलाई छोडें अनि सोफामा पल्टेर आराम गर्न थालें । चाकमा चिक्न पनि मजा नै हुँदो रहेछ भन्ने अहसास भएको थियो । केहिबेरमा उनीपनि मसँगै आएर बसिन् । मैले फेरी उनको पोका खेलाउन सुरु गरें । उनले मलाई रोक्न खोजिन् त्यसपछी मैले सोधें “तपाईंलाई चिक्दा त खुब मजा आयो तर लौ भन्नु त बुबाले हजुरलाई चिक्न थालेको कति भयो ?” झण्डै झण्डै तिन बर्षदेखि बुबाको र तिनको सम्बन्ध रहेछ । कुराकानीकै क्रममा बुबालाई आमाले चाकमा चिक्न नदिएको कारण बाहिर पल्किनुभएको पत्ता लाग्यो । अनि उनले एउटा नौलो कुरा गरिन् - बुबालाई उनीभन्दा पनि फ्रेस माल चिक्न मन लागेको छ भन्ने त्यही भएर उनकै बहिनीमाथी आँखा गाड्नुभएको रहेछ । सँगै बुबाले घरमै पनि छोरिसमेतले पनि मानि भने चिक्न तयार रहेको भन्ने मानसिकता बनाउनु भएको कुरा तिनले भनिन् ।
कुराकानीकै क्रममा मेरो लाँडो फेरि ठन्किएपछी मैले फेरी उनको पोका मसल्न सुरु गरें । उनले भनिन् “भर्खरका केटाहरु त एकपटकमै स्वर्ग पुग्छन्... तपाई त कस्तो जिरे हुनुहुँदो रहेछ...” मैले फेरी उनलाई आफूतिर तानें र उनको मुख अगाडी लाँदै भनें “यसले तपाईंको मुख ज्यादै मन पारेजस्तो छ ? चुस्नुस् मजाले...” उनले मजाले मेरो लाँडो चुसिरहिन् । निकैबेर उनलाई लाँडो चुसाएपछी मैले उनलाई आफ्नो काखमा ताने र उनको पुतीमा लाँडो ठेलेर चिक्न थालें । मैले तलबाट उनको पुतीमा ठेलिरहँदा उनीपनि मेरो काखमा मच्चिन थालेकी थिईन । उनको बुब्स चुस्न मलाई सजिलो भइरहेको पनि थियो । केहिबेरसम्म उनको पुतीमा चिकेपछी मैले हल्का उनलाई उठाएर उल्टो बनाएँ अनि पछाडीबाट उनलाई बेरेर उनलाई फेरी मेरो काखमै बसाएँ अनि हातभरी थुक दलेर लाँडोलाई भिजाउँदै उनको चाकमा छिराईदिएँ । त्यसपछी उनका दुवै बुब्सलाई च्याप्प समाएर उनलाई काखमा मच्चाउन सुरु गरें । उनीसँगको एकैदिनमा मेरो दोश्रो पटकको चिकाई थियो अब स्खलित हुँदा उनको भने तेश्रो पटक हुन्थ्यो । त्यहीँ पोजिसनमा मैले उनीलाई निकैबेर चिकें अनि उनको भार थाम्न अलि गाह्रो अनुभव हुन थालेपछी उनलाई काखबाट हटाएर सोफाको हेडरेष्टमा उनको एउटा टाङ्गलाई अड्याएर घाँटीमा हातले बेर्दै फेरी पुतीभित्र लाँडो छिराईदिएर अनि चिक्न थालें ।
निकै नयाँ नयाँ आसनको प्रयोग पनि मैले गर्न भ्याएको थिएँ भने घरि घरि उनको मुखमा मुख जोडेर चुस्न पनि छोडेको थिईन । कहिबेरमै उनलाई गाह्रो भयो जस्तो गरिन् र मैले उनलाई भुईंमा सुताएर उनका दुबै खुट्टालाई फट्याएर पुतीमा लाँडो घुसाएर दनक दिन थालें । उनले आफ्ना दुवै खुट्टालाई मेरो कमरमा बेर्ने कोशिस गरिन् । चिक्दाचिक्दै म लम्पसार परेर भुईंमा लडें अनि उनलाई आफुसँग समानान्तर बनाए अनि बुब्सलाई समाएर उनको टाङ्गलाई उचालेर पछाडीबाट फेरि चाकमा लाँडो छिराएर चिक्न सुरु गरें । मैले चाकमा चिक्दा नै उनी स्खलित भइन् र उनको पुतीले निकै पानी फाल्यो । अब अन्तिम क्षण आईसकेको थियो त्यसैले मैले उनको चाकबाट लाँडो निकालें र हातले खेलाउन थालें । लाँडो खेलाउँदै मैले उनलाई सोफामा आड लागेर भुईमै बस्न लगाएँ अनि आफू उठेर उनको मुखमा लाँडो छिराएर भित्र-बाहिर गर्न थालें । उनी लाँडो चुस्नमा त्यति उत्साहित देखिन्नथिन् तर मैले जबरजस्ती उनको मुखभित्र लाँडो छिराइरहेको थिएँ । तिन-चार पटकसम्म जरैसित लाँडो उनको गलासम्म पुर्याउँदा म उनको मुखभित्रै स्खलित भएँ । मेरो लाँडोले छोडेको फुसीले उनको मुख भरिभराउ भएको थियो । उनी शिथिल भएर लडिन् । लगातार दुई चोटी नबिराई चिक्दा म पनि निकै थाकेको थिएँ ।
मैले उनीलाई सोफामा आफूसँगै टाँसेर अँगालोमा राखेर सुस्ताएँ । निकैबेरसम्म पनि आरामको छाँटकाँट नदेखेपछी मैले उनलाई काखमा उठाएँ अनि बाथरुममा लिएर गएँ । जब सावरको चिसो पानीले हामीले नुहायौं । हाम्रो जाँगर फर्केर आयो । नुहाइसकेर हामी नाङ्गैनै बाथरुमबाट सोफामा आईपुग्यौं । उनी आफ्नो कोठामा छिरेर टावल बोकेर आईन् अनि मेरो शरिर पुछिदिदैं भनिन् “हजुरले मलाई यति मजाले चिकेर मस्त पारिदिनुभयो कि म तपाईंको लाँडोलाई सधैंभर मेरो पुतीको ढोका खुल्ला राखिदिन तयार छु !” मैले उनको पोकामा हत्केलाले मुसार्दै भनें “अब भोली मेरो घरमै चिक्छु हजुरलाई...! आजकै टाइममा आउनुस् है ?” उनले केहि बोलिनन् । मैले आफ्नो कपडा लगाएँ अनि निस्कन खोज्दा उनले भनिन् “खाजा त ?” “यति धेरै काँचो मासु खाएपछी पनि खाजा खानुपर्छ र ?” अनि म त्यहाँबाट निस्किएँ ।
भाग्यमानी छोरा - भाग ८ [Continue Reading]
भाग्यमानी छोरा : भाग ७ - बुवाको गल्फ्रेण्डसंग उनकै घरमा रसलिला 2018-01-11T08:59:00+05:45 Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Miracle Teen Team
Miracle Nepal - Multilingual Sex Story Website: भाग्यमानी छोरा : भाग ७ - बुवाको गल्फ्रेण्डसंग उनकै घरमा रसलिला